China M52-kacha ọhụrụ ogbo ọkụ dị ike 24 * 60W Dugara anu anya na-akpụ akpụ isi ìhè rụpụta na Factory | Banyere
High nwere ike ikwu ọkụ
Mere asa na-akpụ akpụ isi ọkụ
Doo na-akpụ akpụ isi
Led soro ntụpọ ọkụ
Ikanam profaịlụ ntụpọ ọkụ
Ikanam Fresnel Light
Ọzọ ọkụ static
2021 ọhụrụ ngwaahịa 2000W Dugara strobe na-akpụ akpụ isi ìhè ...
25x40W Magic Panel Matrix mbugharị na-akpụ akpụ isi nwere okpukpu abụọ ...
M52-kacha ọhụrụ ogbo ọkụ dị ike 24 * 60W Dugara bee ey ...
F800-9 * 60w doo na-asa mmanya na-akpụ akpụ ọkụ na pi ...
Z68-splicing ogbo ọkụ n'èzí mbugharị par pikselụ ...
M52-ọkụ ọhụụ kachasị ike 24 * 60W Led bee eye moving head light
ọhụụ ọhụụ ọhụụ dị ike 24 * 60W Led bee eye moving head light bụ ike kacha sie ike doo + ịsa + anu anya mmetụta ada na-akpụ akpụ isi na Chinese ụlọ mmepụta ihe na.
Anyị bụ ndị mbụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na China na-amalite R & D 40W na 60W ada iyi anu anya mmetụta na-akpụ akpụ isi. Ihe nlere a dabara adaba maka ihe nkiri, ihe ngosi onyonyo, mmemme, ihe ngosi ụgbọ ala, ihe nkiri, asọmpi egwuregwu na ihe ndị ọzọ na nnukwu ebe mgbakọ.
Emelitere otu ebe ibubata, na-eme ka ebe ọkụ ya dị gburugburu. Sistemụ optic na-enye mgbatị mgbatị mgbanwe site na 3.5 Celsius -45 Celsius nwere ike ikpuchi ọkwa arụmọrụ zuru ebe niile.
Mere osisi n'usoro ke ma uzo na-achịkwa ọsọ ike dazzling ifuru mmetụta. A na-enweta nsonaazụ vidiyo dị omimi site na ịdepụta pikselụ nke onye ọrụ DMX na-achịkwa ma ọ bụ usoro Art-Net.
Asambodo: OA, RoHS
Akwụkwọ ikike: afọ 2
MOQ: 1 ibe
ọhụụ ọhụụ ọhụụ dị ike 24 * 60W Led bee eye moving head light
O doro anya na ìhè a bụ ihe ọhụrụ nke nkà na ụzụ, nke ọhụụ kachasị ọhụrụ mepụtara ma mepụtara site na onwe anyị 'optic, nke bụ nchapụta ọkụ zuru oke na-eweta nchapụta na agba doro anya. Ọzọkwa, optic ọhụrụ a mepụtara ntụpọ ọkụ gburugburu, pụtara na ọbụlagodi ọkwa ọkachamara, enwere ike iji ya afọ ojuju.
Firstlọ ọrụ izizi gosipụtara ụdị a bụ 2021 Guangzhou Get Show exhibition na-enwu ọkụ, natara ọtụtụ otuto site na ndị ọbịa na ndị ọkachamara na-ahụ maka arụmọrụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla masịrị ya site na nnukwu nchapụta ya, mmetụta ya dị egwu, na obere obere (354 × 444 × 477mm) maka nnukwu ike a. Ọzọkwa gosipụtara, Beyond nwere ahụmahụ bara ụba na imepụta na imepụta oriọna oriọna dị elu karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
24 pikselụ nye 3.5 Celsius na 45 Celsius doo n'akuku, DMX512, RDM na Art-net protocol dị, 5 DMX ọwa ụdị nwere ike izute dị iche iche nke mmemme. Led karịrị okpomọkụ nchedo, ọ bụrụ na isi okpomọkụ dị elu, ihe ọkụ ọkụ ga-ebelata nchapụta ọkụ.
Ọ na - eji mkpọchi mkpọchi / tilt ejiri rụọ ọrụ dị mfe iji nyere aka dịkwuo mfe ijikwa ma ọ bụ tinye ọkụ. Ọzọkwa mpịachi nko onwem.
Gbasara Anya Pan / Tilt
Isi mmalite 24 * 60W 4in1 RGBW duru Pan: 540 Celsius, izi ezi 2.11 Celsius / nzọụkwụ, ezi-n'iji ya gee ntị ziri ezi: 0.008 Celsius
Mbugharị mbugharị 3.5 Celsius - 45 Celsius Tilt: 270 Celsius, izi ezi 0.86 Celsius / nzọụkwụ, ezi-n'iji ya gee ntị ziri ezi: 0.0034 Celsius
Oriri Ike 1500W Iji sistemu nrụpụta magnetik
Njikwa Ihe owuwu
Ọnọdụ Njikwa DMX512 // Music / RDM / ArtNet Ngosipụta: Ngosipụta agba agba 1.8-inch TFT, 180 Celsius na-agbanwe agbanwe
Data In / Out socket: 3 pin & 5 pin pin XLR sockets
Ọnọdụ DMX 21/25/33/129/106 CH (ArtNet) Socket Power: Power Con na / ọpụpụ
Nchedo Ogo: IP20
Edo edo + Super doo uche + Egbuke anu anya mmetụta Ọnọdụ Njikwa DMX512 // Music / RDM / ArtNet
Led pixels control Kwado ijikwa nrụpụta ọkụ site na menu ma ọ bụ njikwa Ọnọdụ DMX 21/25/33/129/106 CH (ArtNet)
0-100% Linear dimmer, na-enwu gbaa n'efu Nkọwapụta
N'ime ugbu a, karịa voltaji, na-echedo ọkụ ọkụ
Fan ọrụ ọsọ autoly kemeghi dị ka isi okpomọkụ Akụkụ: 354mm × 444mm × 477mm; NW: 25 GKS
Light ọrụ ọmụma nwere ike ịgụ na menu Ọkọlọtọ ngwugwu: katọn; Ọnọdụ ụgbọ elu na nhọrọ
Atọrọ 44 dị iche iche nke nnukwu ọrụ nnukwu ọrụ Asambodo
preset 121 iche iche utịp nnukwu ọrụ OA, RoHS
Ngwa Ngwa Ngwaahịa
Factory ngwongwo Mbupu
Nke gara aga: F800-9 * 60w doo na-asa mmanya na-akpụ akpụ ọkụ na pixel akara
Osote: F720-Ike dị elu na-agagharị na-eme ka ọkụ dị n'èzí na 18x40W duru
F800-9 * 60w doo na-asa mmanya na-akpụ akpụ ọkụ wi ...
Z68-splicing ogbo ọkụ n'èzí mbugharị pa pi ...
25x40W Ime Anwansi Panel Matrix mbugharị na-akpụ akpụ isi nwere ...
F720-High ike na-akpụ akpụ na-asa mbugharị n'èzí lighti ...
2021 ọhụrụ ngwaahịa 2000W Dugara strobe na-akpụ akpụ isi l ...
Mmepe ulo oru